I-ANC isolwa ngokubambezela ukugcotshwa kweNgonyama kaZulu | Scrolla Izindaba
I-ANC isolwa ngokubambezela ukugcotshwa kweNgonyama kaZulu
Umndeni wasebukhosini bakwaZulu usola uhulumeni oholwa yi-ANC ngokubambezela ukugcotshwa kweNkosi uMisuzulu Zulu kaZwelithini.
UMntwana uThulani Zulu usola ukuthi uhulumeni wenza lokhu ngamabomu ngoba bacabanga ukuthi ukugcotshwa kweNkosi uMisuzulu kuzozuzisa uMntwana uMangosuthu Buthelezi kanye ne-IFP.
Umndeni wasebukhosini obugunyaza ukuthi uMisuzulu abe yiNkosi, uzwakalise ukudumala kwawo ngokuthi amanye amalungu e-ANC ahudulela umndeni wasebukhosini ezinkingeni zepolitiki eziphakathi kwamaqembu amabili.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi amanye amalungu e-ANC KwaZulu-Natali ebuze mayelana nobudlelwano beSilo uMisuzulu noButhelezi, lowo obizwa ngoNdunankulu wendabuko embusweni wakwaZulu.
Okhulumela i-ANC eKZN uNhlakanipho Ntombela, uthe uButhelezi usebenzisa kabi isikhundla sakhe.
“Asihlangene nakancane nombango owenzeka ebukhosini,” kusho uNtombela.
“Yibo abaya enkantolo. Umndeni wasebukhosini uzothatha isinqumo ngoButhelezi, hhayi thina. Simane nje siyabaxwayisa ukuthi iqhaza lakhe lenza iNkosi ibonakale ingenamsebenzi.”
INkosana uZulu uthe uButhelezi ubelokhu enza umsebenzi wakhe njengalowo obizwa ngoNdunankulu wendabuko kusukela ngowezi-1954.
Ukudelela abantu baKwaZulu-Natali ukucabanga ukuthi bengajoyina iqembu elilodwa lezepolitiki ngenxa kaButhelezi, engeza.
Kusekude ukuthi iNkosi ihlale esihlalweni sayo sobukhosi, ngoba amanye amalungu omndeni wasebukhosini anombono ofanayo.
“Umuntu wesizwe sikaDingiswayo angabiza kanjani iNkosi yakwaZulu njengesichashalala? Angiyena usopolitiki. Kodwa uma ezepolitiki zenza abantu badelele kanje, angifisi ukuba usopolitiki,” kusho yena.